यात्रा–संस्मरण Archives - Majdoor Online
म ढलेको रात- भाग २ (अनिश तामाङ)
November 23, 2016	Flash News, यात्रा–संस्मरण
साउनको बेला थियो । तिमालबाट महाभारत (म्हाभर) को यात्रा तय गरियो । करिब ६-७ घण्टा लामो बाटो हिँडेर हामी महाभारतको जंगल पुग्यौँ । साथमा कमरेड बलिदान पनि थिए । मेरो लागि म्हाभरको यात्रा पहिलो थियो भने बलिदान कमरेडको लागि दोस्रो पटक थियो । निरन्तर यात्राले एकदमै थकित भएछु। हामीले केहि समय विश्राम लिने निर्णय गर्यौ । त्यसो त म्हाभर छिरे ...	Read More »
म ढलेको रात-२
November 22, 2016	Flash News, फोटो, यात्रा–संस्मरण, साहित्य
अनिश तामाङ साउनको बेला थियो । तिमालबाट महाभारत (म्हाभर) को यात्रा तय गरियो । करिब ६-७ घण्टा लामो बाटो हिँडेर हामी महाभारतको जंगल पुग्यौँ । साथमा कमरेड बलिदान पनि थिए । मेरो लागि म्हाभरको यात्रा पहिलो थियो भने बलिदान कमरेडको लागि दोस्रो पटक थियो । निरन्तर यात्राले एकदमै थकित भएछु। हामीले केहि समय विश्राम लिने निर्णय गर्यौ । त्यसो त ...	Read More »
म ढलेको रात
November 14, 2016	Flash News, फोटो, यात्रा–संस्मरण, साहित्य
भाग-१ , त्यस्तै लगभग १२,१३ वर्ष उमेरको थिएँ । पाखुरा सुकेर हड्डी मात्रै देखिन्थ्यो । तर पनि टिसर्टको बाहुला माथि माथि खुम्चाएर पहलमानी देखाउन पछि पर्दैन थिएँ । ट्वाइलेटको भित्तामा आधा फुटिसकेको एेना झुन्डाएर राखेको थियो तर पनि दिनमा कम्तिमा १० पटक हेर्न जान्थें । एेना हेर्दै हाँस्थे । कहिले शाहरुख खान जस्तो लाग्थ्यो कहिले कादार खान जस्तो । मुडमा ...	Read More »
” यात्रा १० वर्ष पछिको चौतारा “
October 24, 2016	Flash News, फोटो, यात्रा–संस्मरण, विचार विश्लेषण
राजधानी नजिकै रहेको सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको सदरमुकाम चौतारा एउटा छुट्टै इतिहास रचेको ठाउ हो ।चौतारा जाने योजनाले रातभर मनमा कौतुहल अनि खुशी छाएको थियो । खुसी साहित्यिक यात्राले गर्दा थियो । कौतुहल दस बर्ष शसस्त्र युद्दको छाप हतेको थिएन त्यसैले मन खेल्न थाल्यो । इतिहासमा अन्तिम अनि कोसे ढुङ्गा साबित चौतारा आक्रमण थियो । त्यति बेला जहाँ म आफू पनि त्यही ...	Read More »
परदेशीको चिठ्ठी आमालाई
October 12, 2016	Flash News, फोटो, यात्रा–संस्मरण, साहित्य
– सुनिता थापा मलाई माफ गर मेरी जननी,आज यति झुटो बोलें, आँखाभरी आँसुको बर्षा हुँदै थियो.. म हाँस्दै छु आमा भनि दिए, छटपटिदै थिएँ, पिडाले छाती दुखदै थियो, म आरमै छु भनिदिएँ | मलाई माफ् गर जननि आज यति सम्म झुटो बोलें.. परदेसीको गाली शिरमा थाप्दै थिएँ .. आमा ! म भजन किर्तन गाउदै छु भनि दिए, भुईको चिसोले सुन्निदा ...	Read More »
गुडबाई मेरा अनन्य मित्रहरु !
October 10, 2015	Flash News, फोटो, यात्रा–संस्मरण, विचार विश्लेषण
झण्डै अढाई दशकभन्दा बढि संगै काम गरेका साथीहरुबाट छुट्टिनु पर्दा अलि अलि त नरमाईलो नै लागेतापनि यो उमेरको हदबन्दिका कारण छुट्टिनै पर्ने थियो । यसलाई निकै सहजतापूर्वक र हार्दिकतापूर्वक आलिङ्गन गर्नैपर्छ । यस चर्चित प्रतिष्ठानबाट म भन्दा अघि कैंयौं साथीहरु बिदा भैसकेका छन् । मेरो भावुक बानीले गर्दा कैंयौं साथीहरुको विदाई कार्यक्रममा उपस्थित हुन असमर्थ भएको थिएँ । तरपनि उनिहरुको ...	Read More »
एनेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष दिवंगत कमरेड पोष्टबहादुर बोगटीको संक्षिप्त जीवनी यसप्रकार रहेको छ
September 15, 2015	Flash News, फोटो, यात्रा–संस्मरण, विचार विश्लेषण
जय कार्की, अन्टुफ प्रकाशन विभाग १.उहाँको जन्म जुलाई १८, १९५३ तुप्चे गाविस—२ नुवाकोट २०१० साल साउन ३ गते भएको थियो । २.उहाँको शिक्षा सामान्यमात्र तर स्वअध्ययनवाट प्रशस्तमात्रामा ज्ञान आर्जन गर्नुभएको थियो । ३. राजनैतिक जीवन यात्रा सन १९६८ वाट शुरु । ४.सक्रिय राजनीतिमा प्रवेश सन १९७७ मा पुष्पलाल श्रेष्ठले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीवाट ५.जेल जीवनः दुई पटक जेल परेको ...	Read More »